ỌNWU NA-ADORO MMASI M KARI KEMGBE ONWU NWUNYE M
Previous FAYEMI: MMERI M NWERE MAKA ODINIHU NIGERIA
Next RONALDO BIARUTERE MAKA OGWU NDI JUVENTUS
AKUKO UWA, IHE N'EME N'OBODO, Local News, Politics
Onye bubu onye ochichi nke Osun State, Chief Bisi Akande, ekwuola na onwu egbuola ya karia kemgbe nwunye ya, Omowumi, otu afo gara aga na otu umu ya si eme ememe onye nwuru anwu.
Akande kwuru na ọ nọ na-enwekarị owu ọmụma, onye nwere nkwarụ na onye na-enweghị olileanya ebe ọ bụ na nwunye ya nwụrụ n’afọ gara aga ka ọ na-akọwa ya dị ka onye na-echebara onwe ya echiche nke ọma nke na-elekọta ya dịka nne ruo mgbe ọnwụ nwuru ya.
RONALDO BIARUTERE MAKA OGWU NDI JUVENTUS
Onye isi oche nke ndị niile na-enwe ọganihu na-ekwu na nke a na Satọdee mgbe ọ na-echeta nwunye ya, na-ekwu na owu na-ama ya, onye nwere nkwarụ na nke mmetụta uche kemgbe oge ahụ.
O kwuru, sị, “Adịghị m ike, ọ na-ewutekwa m na m na-etinye onwe m na mberede nke ọdịnala anyị kpọrọ alụmdi na nwunye site ná mmalite. Adịghị m mma ka nwunye m nwụọ n’ihu m. M na-ahụ na, ebe ọ bụ na n’abalị ahụ, enwere m mmetụta owu na-ama m mgbe nile, onye na-adịghị ike na enweghị olileanya. ”
“Kemgbe ahụ, n’agbanyeghị obiọma na enyemaka nke ndị enyi m, ndị enyi m na ndị ikwu m, ọbụlagodi na nlekọta na ịhụnanya siri ike nke ụmụaka m ji ịnụ ọkụ n’obi kwuo, ọ dịtụghị mgbe ọ dị m ka ọ bụ n’efu na dịka mmetụta uche dịka m dị taa. ”
OBASANJO JURU OGWE IHU N’IHU NA NZUKO AFREXIMBANK ABUJA
“Mgbe ụfọdụ, m na-agagharị n’ụlọ m na-enweghị ihe mgbochi na mberede na nwunye m ga-aza m na mberede. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụghị otu mgbe ọ nabatara m na mkparịta ụka ọ bụla ma ọ bụ na-achọgharị m iko mpempe akwụkwọ na-adịghị mma, mgbochi aka na mgbaaka na ụzọ ya. Ọ ghaghị ịnọ na-akwadebe ebe m ga-anọ ya nso n’eluigwe.
Otú ọ dị, mgbe m hụrụ otú ụmụ anyị si na-echeta ya kemgbe ọ nwụrụ otu afọ gara aga, onwu na-adọrọ mmasị m karị. Ana m ekpekwa ekpere ka m nwụọ ụdị onwu a na-enweghị ihe mgbu nakwa maka olili ozu m dịka ebube dịka nke nwunye m. ”
Ụmụ nke onye ahụ nwụrụ anwụ kwalitere isi ụlọ ọrụ ahụ ike, nke dị na Isedo 1, Ward 4, Ila Orangun na-asọpụrụ nne ha na-ekpe ekpere na-ekpe ekpere ka o nyefee mkpụrụ obi ya.
Onye bubu Commissioner maka Health na State Osun, Dokita Temitope Ilori, onye otu n’ime umu Akande kwuru na umu nke onye nwuru anwu kpebiri icheta ememe ncheta mbu nke nne ha na nwelite ulo oru ahuike iji nyeghachi ya mba.
TRUMP, OBAMA, HAPU NDI NA-ESO UZO 2.4M NA TWITTER
O kwuru na ụlọ ọrụ ahụike ahụ kwalitere ga-aba uru dị ukwuu iji kwalite ndụ dị mma n’etiti ndị mmadụ nọ n’ógbè ahụ ma mee ka ha nwee ọganihu.
AKANDE DEATH hot hot news HOTNEWS Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbido tv isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV LATEST news NIGERIA NIGERIAN OSUN POLITICS post posts state YORUBA